New Member Member Ikarusc42
mubvunzo New Member Member Ikarusc42
8 mwedzi 3 mazuva apfuura #1184 by Ikarusc42
Kwazisai mumwechete. Ndabatanidzwa nhasi. Ndine Chelsea Pensioner iri muLondon UK. Ndakanga ndiri kumhanya siming kubvira 1980. Ini ndakabatawo Private Pilots License kusvikira 2016 apo yakava yakadhura zvikuru kuti ini ndibhururuke. Ndakabatana neRioooo kuti ndiwane Boeing Osprey asi handikwanisi kuikurira kuburikidza nekambani yedu IT yega yega nokuti havazobvumiri ports 8080 kana 8888.
Pane munhu angaratidza nzira yandingakwanise kuwana Osprey ??? Ndinokutendai mukufungidzira.
Time chokusika peji: 0.422 mumasekonzi